CHERRY MACAAN "ADELINE": SHARAXAAD KALA DUWAN, POLLINATORS, SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Cherry macaan "Adeline": dabeecadaha, khibradda iyo ixtiraamka
Way adagtahay in la qiyaaso beer beerta ah oo aan jiri lahayn john - mid ka mid ah geedaha khudradda jecel. Laga soo bilaabo tiro badan oo kala duwan, bannaanka u khibrad badan ayaa dooranaya geed miro Adeline, taas oo si deeqsinimo leh soo bandhigo milkiilayaasha leh berry dhadhan fiican iyo caafimaad leh. Aynu isku daynaa inaanu go'aan ka gaarno sifooyinka ugu muhiimsan, faa'iidooyinka iyo faa'iidooyinka kala duwan ee noocyo badan oo caan ku noqday.
Darajada "Adeline" waxaa soo saaray O. Zhukov iyo aqoonyahanno kale oo ka socda guddiga cilmi baarista cilmiga sayniska ee All-Russia. Helitaanka "Glory of Zhukov" iyo "Valery Chkalov". Waa meelo kala duwan oo casho ah.
Ma taqaanaa? Dadku waxay tixraacaan cherry sida "cherry sherry". Shimbiraha ayaa si fudud u duuli kari waayay, haddii ay ku arkaan muuqaalkii, daaweyn jecel.
Sida ku cad sharaxaadda cherry "Adeline" iska leh noocyo of Bisaylkiisa dhexdhexaad ah. Geedka miro-geedeedka ayaa iska leh geed-socodka koritaanka dhexdhexaad ah oo gaadhaya ilaa 3.5 m, taajkiisuna waa barxadda, wax yar oo kor udhaca, dhexdhexaad ah. Laamaha toosan, ku daboolan ballaaran oo ballaaran, ovalaha-oval, caleenta siman ee midabka cagaaran, ka bax jir iyo jilif fudud.
Gorma waa dhexdhexaad ah, oo ka bilaabma 5 ilaa 6 garaam. Waxay leeyihiin muuqaal wadnaha ah oo leh jilbaax ballaaran iyo midab-dhexe, midab madow. Saxarka macmacaanka macmacaanka waa casaan, casiir leh, dhexdhexaad ah cufnaanta. Waxaa si fudud looga soocaa dhagax yar oo miisaankeedu yahay 0.2 g.
Sidoo kale fiiri sharaxaada kala duwan ee geedka: "Revna", "Regina", "Bull's Heart", "Bryansk Pink", "Largerad", "Iput", "Leningradskaya black", "Fatezh", "Chermashnaya", "Ovstuzhenka".
Adeline macaan ayaa leh lahjada noocyo iskiis ah oo u baahan baahida warshadaha. Deriska ugu wanaagsan ee geedaha midhaha wuxuu noqon doonaa Gabayga iyo noocyada Rechitsa.
Waa muhiim! Waxaa ka mid ah geedaha cherry ee noocyo kala duwan yihiin marar dhif ah is-qaadid. Sidaa darteed, jecel ee beerta, kuwaas oo aan ka ogaanin noocyada kala duwan, inta badan ku xanuunsado niyadjab ah goosashada saboolka ah. Waxyaabaha kala duwan ee is-isu-dhafan waxay u baahan yihiin pollinators.
Adeline, sida kala duwan hore, waxay galaan marxalad u dhaxaysa sanadka afraad ee noloshooda. Wakhtigan la joogo hal geed ayaa laga qaadi karaa 10 kg jeeriga macaan Sanado badan, dhalidu waxay kordhi doontaa oo kaliya, gaareysa xadka 15-25 kg of berry ka soo geed.
Wixii "Adeline" waxaa lagu gartaa xilliyo ubax ah, oo bilowda bilowga ama bartamaha sanadka labaad ee Maajo.
Ma taqaanaa? Markii hore, geedka geedi cherry waxaa loo isticmaalay xanjo.
Xilliga Bisaylkiisa miraha macmacaanku wuxuu bilaabmaa mudada dhexe, oo ah bartamaha bisha Luulyo. Miraha ayaa u bislaadaan dhowr marxaladood, sidaas darteed beergooyska ayaa dhowr jeer la fuliyaa.
Kala duwan ayaa leh celcelis dhalid. Sida laga soo xigtay qiyaasaha, celceliska celceliska sanadkiiba hal hektar waa qiyaastii 80 sent. Tilmaamaha Heerka Sare - 140 kg / ha.
Darajada gaadiidka "Adeline" celcelis ahaan, laakiin haddii aad raacdo xeerarka goosashada, waxay noqon kartaa mid wanaagsan. Miraha loogu talagalay gaadiidka waxaa lagu ururiyaa oo kaliya cimilada qallalan. Berry kasta waxaa la riixay jirida. Harvest waxaa lagu duubaa weel yar oo 4-6 kg ah.
Waa muhiim! Goynta waa in la sameeyaa wadajir ahaan, si aanay u waxyeeleynin berry. Maadada waa inay ahaato cagaar. Haddii ay ku guuleysatey inay hesho midab jaalle ah ama midab madow ah, waxay macnaheedu tahay in midhaha ay aad u badan tahay, iyo goosashada ma awoodi doonto in la soo qaado fogaanta fog.
Cadaadiska xaaladaha deegaanka iyo cudurrada
Kala duwanaanta noocaas ahi waxay ku fiicantahay cimilada Gobolka Central Black. Cadaadiska cudurada, sida moniliosis ama coccomycosis, waa dhexdhexaad. Kala duwan ayaa sidoo kale waxay u adkaysatay cayayaanka.
Adeline wuxuu leeyahay dulqaad isku dheelitir dhexdhexaad ah. Kuleylka kuleylka ah, kuleylaha qallalan waxay noqotaa mid soo jiidasho leh
Waxaa jira hybrid of jeeriga iyo jeeriga, kaas oo leh magaca "cherry".
Cherry macaan ee noocyo kala duwan ayaa sababa jiilaalka tan iyo ay leedahay hardiness jiilaalka sare. Burooyinkeeda ubaxyada ayaa badanaa saameeyeen dhaxan waxayna leeyihiin celcelis adag oo jiilaalka ah. Si loo kordhiyo tilmaamehahan, beeralayda khibrad leh waxay ku talinayaan in ay daryeelaan baahida geedka (waraabinta, cuntada, iftiinka) inta lagu jiro xilli sii kordhaya.
The Adeline macaan oo macaan si deeqsinimo leh soo bandhigaa milkiilayaasha leh miraha dhadhan fiican leh iyo casiir leh. Goosashada wanaagsan waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku raaxaysatid maraq cusub, diyaarna u sameyso jiilaalka (isweydaarsiga, miraha candhuufta, astaanta, ilaalinta iyo kuwa kale). Waa in la xusuusnaado in daaweynta kulaylka ee berry ma u ogalaan inay ilaaliyaan dhammaan walxaha faa'iido leh, sidaas darteed waa ka wanaagsan inaad isticmaasho cherry macaan oo ceeriin. Laakiin xilli miro cusub ayaa si dhakhso ah u gudbaya in badan oo aanay haysan waqti si buuxda loogu raaxaysto miraha macmalka ah. Si loo dheeraado nolosha iyo ilaalinta walxaha waxtarka leh ee berry ah ugu yaraan dhowr bilood, waxaa lagu talinayaa in la barafoobo.
Ma taqaanaa? Saynisyahanada casriga ahi waxay soo jeedinayaan in cherry uusan ka soo jiirin jeeriga. Dhammaantood waxay ku dhaceen habka kale, maxaa yeelay geedkii miro ayaa u muuqday qiyaastii 10 kun oo sano ka hor, halka geedkii cherry uu u muuqday 8 kun oo sano ka hor.
Maanta, dhaqanka koonfureed ma ahan mid aan caadi aheyn oo ku yaal jardiinooyinkeena, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad ogaatid faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka kala duwan ee kala duwan si loo doorto midka ugu wanaagsan.
Adeline wuxuu leeyahay dhowr sifooyin oo wanaagsan:
dhadhanka sare ee miraha macmalka badan.
Dhibaatooyinka waaweyn ee "Adeline":
lagula taliyay beerista kaliya ee gobolka Central Black Earth;
caabbinta qulqulka cudurada iyo cayayaanka.
In kasta oo ay jiraan cillado yaryar, "Adeline" ayaa weli ah noocyo kala duwan oo ah jiilka macaan ee badan. Geedkan geedi-socodka ah ee daryeelku wuxuu jecel yahay milkiilayaashiisa leh goosashada wanaagsan, taas oo aad loogu qiimeeyo badeecadeeda iyo tayada dhadhanka.